Sidee ayaan u qori karaa liis heer sare ah ee rasaasta Amazon si kor loogu qaado isbeddelkayga?
Looma baahna in la yiraahdo malaha malaha wax badan oo ka mid ah guysada iibiya Amazon maadaama ay heystaan ​​heshiis iibsi oo guuleysta. Kuwa kale, oo leh liis sax ah oo si macquul ah u leh dhibcooyinka Amazon Amazon waa xaqiiqo ah oo ah doorka muhiimka ah, marka ay timaaddo go'aanka kama dambaysta ah ee lagu iibsado martidaada. Dabcan, si aad u hesho qaybta rasmiga ah ee rasmiga ah waxaad u baahan doontaa inaad maalgashato wakhti iyo dadaal si aad u abuurto shey gaar ah oo loo qoondeeyay content oo iibisa. Dhinaca kale, daqiiqad kasta oo la qaato si loo dhammaystiro hawsha ayaa had iyo jeer bixin doonta, waan hubaa. Waxyaabaha ay tahay in dhibcahaaga Amazonaga si fudud loogu beddeli karo hantida ugu dambaysa ee aad ku qanacsan tahay saamiga libaax ee macaamiisha suurtagal ah si aad u noqotid kuwa iibsada dhabta ah. Oo waxay timaaddaa iyada oo aan sheegin in mawduucaaga alaabtu uu yahay muhiimadda ugu muhiimsan. Laakiin hoosta ayaan u fuuli doonaa gaar ahaan sare u qaadidaadaada Amazon oo leh liis dhibcood oo liis gareynaya habka saxda ah. Halkan waa sida aad kuugu guuleysan karto arintan.
Dhamaan waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Dhibcaha Amazon
1. Marka hore, qaybaha aad ku talagashay. Sidaa darteed, ka fikir laba goor ka hor intaad ku dhejineyso waxyaabaha muhiimka ah ee muhiim u ah sharaxaadda boggaaga.
2. Marka xigta, hubi inaad sifooyinka ugu sarreysa ee alaabtaada ku iibiso meel ku dhow xabbadahaada hore, si ay u raacaan inta ka hadhay si ay muhiim u yihiin. Si kale haddii loo dhigo, waxaa lagugula talinayaa in aad hayso hantidaada ugu xoogan ee ku qanacsan liiska.
3. Meel kasta oo xarig ah wuxuu leeyahay laba dhinac oo bilad ah. Waxaan loola jeedaa in haysashada ilaa 500 oo xaraf loo oggol yahay mid kastaa wuxuu u muuqdaa mid xaqiiqda ku filan. Dhinaca kale, si kastaba ha ahaatee, waa inaadan waligaa isku dayin inaad si buuxda u isticmaasho booska oo dhan qiimaha oo dhan. Dabcan, haddii aadan rabin inaad u ekaato sida marin habaabinta macaamiishaada.
4. Qodob kasta oo ku xusan liiska rasaastiyadu waa in had iyo jeer la badiyaa bilowga hore.
5. Iyadoo la tixgelinayo in aysan jirin baahi adag ama qasab ah in lagu xakameeyo halkaa, diiradda saarista qorista jumlado kala duwan iyo qoraallada gaaban waxay noqon doonaan go'aan aad u wanaagsan.
6. Dabcan, waxaad xor u tahay inaad ku darto faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan faa'iidooyinka gaarka ah ama alaabta la sheegay. Sidaa daraadeed, hubso inaadan ku dhaafin iyaga.
7. Amazon ma ogola in liiska hubka liisku uu ku jiro liistada macluumaadka ku saabsan qiimaha, ama wixii macluumaad kale ah oo loogu talagalay ujeedooyin xayeysiinta furan.
8. si taxaddar leh markaad daboolayso faahfaahin khaas ah, sida midabada, qaabka, walxaha, baaxadda, iwm. Dabcan, haddii aysan ahayn kuwo dhab ah oo muhiim ah muhiimadda muhiimka ah ee u baahan muhiimadda gaarka ah. Isticmaalida ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee aan weli la isticmaalin ee alaabtaada muhiimka ah ayaa noqon doonta faa'iido kale oo aad ku guuleysan karto tartanka jaranjarada ee xukuma Amazon ee suuqa xaafadda.
10. Ugu dambeyntii, inkastoo ay u muuqato in aan maskaxda lahayn, dhibcaha ugu firfircoon ee amazon Amazon waa kuwa si sahlan loo toli karo Source . Ka dib, wax kasta oo iibsadaha ah oo dhan ma bixiyaan booqasho kaliya si aad u qoddo qodobbada oo dhan oo sheegaysa sababta ay alaabtaadu u qalantid wax iibsi, sax ah?